Baarlamaanka Itoobiya oo meel mariyay in Dowladda Federaalka ay xiriirka u jarto hoggaamiyeyaasha gobolka Tigray | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Baarlamaanka Itoobiya oo meel mariyay in Dowladda Federaalka ay xiriirka...
Baarlamaanka Itoobiya oo meel mariyay in Dowladda Federaalka ay xiriirka u jarto hoggaamiyeyaasha gobolka Tigray
Baarlamaanka Itoobiya ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya in Dowladda Federaalka ay xiriirka u jarto hoggaamiyeyaasha gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas ku yaalla, kaddib xurguf soo kala dhex gashay oo ku aaddan doorashada dib loo dhigay.
Go`aankan micnihiisu maaha in xiriirka ka dhaxeeya xukuumadda Addis Ababa iyo gobolka Tigray uu gebi ahaanba go`ayo. Dowladda Federaalka ayaa la sii shaqeyn doonta maamullada hoose ee gobolka sida maayarrada iyo xildhibaannada deegaanka, iyadoo siin doonta adeegyada aasaasiga ah ee gobolku u baahan yahay.
Dowladda Ra`iisul Wasaare Abiy Axmed ayaan weli ka jawaabin arrintaas.
Xisbiga (TPLF) eek a taliya gobolka ayaa muddo-xileedka loo dheereeyay xukuumadda Ra`iisul Wasaare Abiy Axmed oo ku ekeyd 5-tii bishan October – ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsaneyn, iyagoo intaas ku daray in gobolku uusan ka amar qaadan doonin dowladda Federaalka.
Xisbiga TPLF ayaa u yeeray xubnaha kaga jira dowladda. Afhayeenka Aqalka Sare ee dalkaas ayaa ku hanjabay in ciidamo ka socda federaalka loo diri doono gobolka.
Doorashada Itoobiya ayaa la qaban doonaa bisha September sanadka soo socda.
Previous articleMadaxweynihii hore ee HirShabelle oo gaashanka u daruuray guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi
Next articleKenya oo ku dhawaaqday in 12-ka bishan la furayo iskuullada
Federal lawmakers plan to announce extensionĺ
Ciidamada Danab oo sheegay in ay burburiyeen saldhig ay lahaayeen...
Ahmed Madoobe oo ka Hor Yimid saamiga looga Qoondooyey Aqalka Sare